Sambany nisy tamin’ny teny Aymara ny fampiharana fiarovana ankihy noho ny asan’ireo mpikatroka fiteny Boliviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Febroary 2022 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, English, Português, Español, русский, 日本語, Italiano, polski, English
Mpikambana ao amin'ny Jaqi Aru nandritra ny hetsika fandikana ny fampiharana fiarovana ankihy (nomerika), Orbot, tao El Alto, Bolivia. Sary avy amin'ny Localization Lab. Nahazoana alalana.
Andrea Chong Brás, mpanoratra ity tantara ity, no mpitantana ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny Localization Lab. Niara-niasa tamin'i Jaqi Aru izy tamin'ny tetikasa izay nandikàna ny fampiharana Orbot ho amin'ny teny Aymara.
Vondrom-piarahamonina virtoaly ahitana mpikatroky ny teny Aymara avy any Bolivia no nandika ny fampiharana fiarovana ankihy Orbot tamin'ny fitenin-drazany mba hanampiana ireo mpiteny azy ho azo antoka kokoa ao amin'ny aterineto — sy mba hanehoana tsara kokoa ny fisian'ny tenin-drazan'izy ireo ao amin'ny tahalan'ny habaka.
Manome fifandraisana aterineto amin'ny finday mahaleotena amin'ny alàlan'ny fanafenam-pifamoivoizana ny Orbot, fampiharana azo trohana amin'ny finday Android no sady manafina izany amin'ny alàlan'ny fandefasana azy handalo andiana solosaina manerana izao tontolo izao, fiasa tena ilaina rehefa miditra amin'ny alàlan'ny wifi ho an'ny daholobe amin'ny fijerena ireo fampahalalana manokana momba ny banky na mandefa ny mombamomba ny tena manokana anjotra.
Sambany ity karazana fampiharana ity no azon'ny mpiteny Aymara ampiasaina noho ny asan'ny Jaqi Aru, vondrom-piarahamonina mpirotsaka an-tsitrapo izay mampiroborobo ny fandikan-teny Aymara sy ny famoronana votoaty an-tserasera nanomboka tamin'ny taona 2009. Ny tetikasa taloha nataon'ny vondrona dia ahitana ny fandikana ny teny miasa ao amin'ny Facebook ary ny tetikasa mitohy dia ahitana ny fandikana lahatsoratra ho an'ny Global Voices sy ny fampiroboroboana ny fandikan-teny sy famoronana votoaty amin'ny teny Aymara ao amin'ny Wikipedia.
Ho an'ny dikanteny Orbot, nahazo fanampiana fandrindrana avy amin'ny Localization Lab ny Jaqi Aru, izay miara-miasa amin'ny vondrom-piarahamonin'ny fiteny tahaka izany manerana izao tontolo izao mba hahatonga ny teknolojia open source (tovozina malalaka) ho an'ny mpihaino eo an-toerana. Ho an'ny Tale Mpanatanteraka Dragana Kaurin, resaka fahalalana tsara kokoa ny fandikan-teny momba ny teknôlôjia satria resaka momba ny zon'ny fiteny izany:
Mila manahy ny amin'ny fiarovana ny tenany anjotra ny mpisera Aterineto tsirairay, manomboka amin'ny fiarovana ny tenimiafina ka hatramin'ny fisorohana ny viriosy ary ny fitetezana amim-pitandremana amin'ny aterineto. Saingy mety hampisavoritaka ho an'ny maro amintsika ny firesahana momba ny fiarovana ankihy, ary mety midika fa manakana ny olona tsy hiditra amin'ny teknolojia tena ilaina ny fampidirana sakana amin'ny fiteny eo ambonin'izany .
Fiteny ofisialin'i Bolivia sy ny ampahany ao amin'i Pero ny teny Aymara ary ampiasaina any avaratr'i Shily sy Arzantina. Iray amin'ireo fiteny indizeny vitsy an'i Amerika manana mpiteny maherin'ny iray tapitrisa izy io — kanefa, tahaka ireo fiteny vitsy an'isa maro, kely ny fisiany anjotra.
Rubén Hilare Quispe, sekretera jeneralin'ny Jaqi Aru, nilaza tamin'ny Global Voices hoe:
Te-hahafantatra ny fomba atao mba ho voaaro amin'ny aterineto ny olona, ​​ary satria manana an'ity fampiharana ity amin'ny fiteninay izahay ankehitriny, dia afaka manomboka mampianatra ny olona mikasika ny fomba fampiasana azy io.
Aymara amin'ny vanim-potoana ankihy
Tsaroan’i Rubén ny fotoana nandràrana ny fitenin-drazany tao an-dakilasy. “Any amin'ny sekoly ambaratonga fototra, voasazy izahay rehefa miteny Aymara. Tsy maintsy tamin’ny teny Espaniola avokoa ny zava-drehetra.”
Maro ireo fanadihadiana nilaza fa ny tahan'ny fandaozana sekoly any amin'ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitr'i Bolivia nandritra ny taona 1980 sy 1990 dia noho ny politikan'ny teny mahery vaika mpomba ny Espaniola izay nanimbazimba ireo mpiteny indizeny.
Ny taonjato maro nanjakan'ny mpanjanaka Espaina niaraka tamin'ny politika izay nanome lanja ny teny Espaniola teo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny andrim-panjakana no nitarika fanilikilihana henjana ho an'ny vondrom-piarahamonina teratany. Midika izany fa “natao sesitany an-tanindrazana” ny fiteny indizeny — nahatonga ny maro ho menatra hiteny ny tenin-drazana imasom-bahoaka.
Nanova ny fifantohana tamin'ny fahasamihafan'ny fiteny ny fiovana vao haingana teo amin'ny rafi-panabeazana, saingy mbola miatrika fanavakavahana tsy mifandanja ao Bolivia ireo mpiteny indizeny — izay misy voka-dratsy lehibe ho an'ny olona miteny Aymara.
Na dia eo amin'ny 17 isanjaton'ny Boliviana aza no milaza ho mpiteny Aymara, dia heverina fa atahorana ny fiteny, satria tombanan'ny olona sasany fa 2 isanjato ny fihenan'ny isan'ny mpiteny isan-taona.
Jaqi Aru dia midika hoe “fitenin'ny vahoaka” na “feon'ny vahoaka”. Eto ireo mpikambana ao amin'ny Jaqi Aru dia miara-miasa mandika ny fampiharana Orbot ho amin'ny teny Aymara. Sary avy amin'ny Localization Lab. Nahazoana alalana.
Miasa mafy ireo mpikatroka fiteny ao amin'ny Jaqi Aru mba hamadihana io fironana io. Ho an'ny Tale Mpanatanteraka Edwin Quispe Quispe, anisan'ny antony manosika ny asan'ny fikambanana ny fanontaniana lalindalina kokoa momba ny maha-izy azy, ny fiteny ary ny dikan'ny maha-mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Aymara azy:
Saika ahitana taranja fampianarana momba ny kolontsaina sy ny tantara Andeana ny anjerimanontolo rehetra sy ny afisim-pianarana. Ho an'ny maro aminay, miteraka fanontaniana momba ny mari-panondroana anay manokana izany. Manontany tena izahay hoe: Iza moa izahay? Inona ny mari-panondroanay? […] Ho anay, dia ny fiteny no mari-panondroanay. Raha very ny fiteninay, dia very ny fomba amam-panaonay, ny kolontsainay, ny tantaranay, ny fahalalan'ny razanay — very ny zava-drehetra.
Satria tsy mitsaha-mitombo ny taham-pidirana amin'ny aterineto any amin'ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao, dia mitombo koa ny fangatahana teknolojia amin'ny fiteny samihafa. Misy ny fitomboan'ny filàna “famangitana (famantaran-toerana)“, na ny dingana fampifanarahana ny votoaty amin'ireo mpihaino eo an-toerana.
Mazava ho azy, ny orinasa ihany no manao laharam-pahamehana ny famantaran-toerana (localization) raha toa ka mahazo tombony amin'ny vokatra– ny tombom-barotra izy. Saika tsy mahafeno an'io fenitra io mihitsy ny fanaovana ny teknolojia ho hita amin'ny fiteny vitsy an'isa, ka nahatonga ireo mpiteny ny teny tahaka ny Aymara ho tavela aoriana ao amin'ny aterineto. Hoy i Rubén hoe:
Raha novolavolaina amin'ny fiteny iray ny fitaovana iray, dia io fiteny io no atao laharam-pahamehana. Midika izany fa tsy voasolo tena ny fiteny hafa, toa ny Aymara.
Araka ny voalazan'i Kaurin, miasa mafy ireo developera Orbot mba hahatonga ny fidirana amin'ny fiteny ho laharam-pahamehana:
Ny Tetikasa Guardian [mpamolavola ny fampiharana Orbot] dia tena natokana amin'ny fametrahana ny fampiharan'izy ireo ho hita amin'ny fiteny maro araka izay azo atao. Efa elaela ihany izahay no nandrindra ny famangitana amin'ny Orbot, ary nanararaotra ny fahazoana miara-miasa amin'ny hetsika iray manodidina ny fiteny Aymara.
Ankoatra ny fiarovana ankihy, mahita ireo mpikambana ao amin'ny Jaqi Aru fa fomba iray hafa ity fampiharana ity mba hiantohana fa mbola velona ny Aymara, mitombo ary mahazo ny toerana mendrika azy eo amin'ny tontolon'ny aterineto. Raha nanontaniana hoe midika inona ho an'ny vondrom-piarahamoniny ny fananana fampiharana tahaka izao amin'ny teny Aymara, dia hoy i Rubén namaly:
Misy ny olona manao tsinontsinona milaza hoe: Inona izany Aymara? [Orbot] no iray amin'ireo ohatra amin'ny zavatra azonay atao amin'ny teny Aymara. Ho hitan’ny olona izany ka hilaza hoe: “Oay! Manana toerana amin'ny teknolojia ny Aymara.”